FBC - Preezdaant Lammaan Caffeerratti haasaa taasisan keessaa muraasa
Finfinnee, Adoolessa 10,2009(FBC)-Dhimmoota gurguddoo preezdaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaan yaa`ii Caffee Oromiyaa irratti kaasan.
Akkuma rakkoo tokkoo hundeedhaan hiikudhaaf madda rakkichaa beekuun fala jalqabaa ta`eett,i raawwii karoora bara kana sirriitti madaaluudhaaf haala karoorichi keessatti raawwatame beekuun murteessadha jedhan preezdaant Lmmaan.
Raawwiin karoora bara kanaa haalli rakkoon nageenyaa naannoo keenyaa sadarkaa yaachiisaa ture keessatti kan raawwatame ta`uu eeranuun
preezdaant Lmmaan, hongee naannoo keenya mudateen ummata miliyoona 4 hoongeef saaxilamee ture dhimmi lubbuu baraaruu dhimma cinaatti dhifamee hojiin biraa hojjachuun itti danda`amu hin turre. Kanaaf mootummaan hojii kanarratti xiyyeeffachuun sochii cimaa tasiifameen sababii hongeetiin lubbuun nama tokkoo akka hin baane tasisuun danda`ameera jedhaniiru.
Raawwii hojii karoora bara kana keessatti rakkoon daangaa wajjiin walqabatee rakkoo hamaa jiruu fi jireenya ummataa gaaga`aa turee fi sababii kanaan lubbuun namaa guyyaa guyyaan badaa tureerraa kan ka`e, rakkichi ummata keenya komachiisee amantaa mootummaarratti qabu dhabee hanga shakkutti geessee fi miseensota Caffee dallansiise hiikuun dirqama ture jedhanii, gama kanaan hojjii cimaa hojjatameen bu`aan argame injifannoo guddaadha jedhaniiru.
Preezdantiin haala ulfaatinaa fi walxaxiinsa rakkoo daangaa yeroo ibsan rakkoon hanguma oolee buluun gatiin kafalchiisu guddaadha jedhanii, rakkoo daangaa wajjiin wal-qabatee woggoottan kudhnan dabran keessatti osoo fala hin argatin kan turee fi heddu walxaxaa fi sadarkaa yaachiissaa irra kan gahe ture jedhan.
Bara kana hojjii mootummaan xiyyeefannaa fi kutannoon itti galee hojjatameen rakkoo waggaa kudhaniitti hiikuun dadhabame baatii kudhan keessatti bu`uura seeraatiin fala akka argatuu fi qaama hundaa biratti beekamtii seeraa akka argatu tasiisuun hiikkameera jedhan.
Haala ijaarama mootumma ilaalchisee prezdaant Lammaan haaromsaan booda marii`annee qofa miti kan addaan bane; mootummaa akka haaraatti ijaarudhaani. Kanaanis hoggantoota kumaatama jijjiiruun olii hanga gadiitti mootummaa bifa haarayaan ijaaruun hojii ulfaataa ture jedhan.
Hojiin kun nama taa`ee ilaaluf salphaa fakkaachuu danda`a; garuu nama hojiicha keessa jiruuf hedduu ulfaataadha jedhanii; hoggansa haaraan ijaarame hojii keessa galchuun hojiin walbarsiisuu fi madaqsuun hangam ulfaataa akka ta`e madaluun barbaachisaa akka ta’es jala sararaniiru.
Hojii bara kana hojjatame keessaa kan hin milkaa`in dhimma daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi mootummaa naannoo Oromiyaa akka ta`e himaniiru. Sababii humnaa ol ta`een raawwatamuu dhabus hojiin daangeessuu hundaa ol dhimma murteessaa waan ta`eef, xiyyeeffannaan kan hojjatamu ta`u himaniiru.
Maastar plaanii magaalaa Finfinnee otoo naannoo Oromiyaa wajjin hin marii`atin mana maree bulchiinsa magaalaa Finfinneetin murtaa`e ilaalchiisee gaafii miseensonni Caffee kaasaniif, deebii kennaniin dhimma maastar planii magaalaa Finfinnee mootummaan naannoo Oromiyaa kan hin beekne ta`uu himanii; maastar plaanichi dhimma naannoo keenya irratti rakkoo qaba taanan hojiirra ooluu hin danda`u jedhaniiru.
Oduuwwan Biroo « Qubannaan seeraan alaa godina Wallaga bahaa saaxilame	Ibsa ejjannoo hirmaattota koonfaransii dhaabbattummaa 7ffaa DhDUO »
Read 43282 times